WARARKA CIRAAQ: APRIL 8, 2003
Hotelka ay warfidiyeenadu ka deganyihiin Baqdaad oo la duqeeyey
Suxufiyiin lagu diley Baqdaad
Ruushka oo sheegay in Maraykanku weeraray Safiirkoodii Ciraaq
MAXAA SOO KORDHAY MAANTA... GUJI.. IOL
[weriye katirsan Aljazeera oo la diley]
: Daawo Wararka Dagaalka [ENGLISH] | AMA DAAWO ABU-DHABI.TV [ARABIC]
Wararka ka imanaya Caasimada Ciraaq ee Baqdaad oo maanat ay ka dhaceen dagaalo iyo duqayn aad u daran ayaa sheegay in taangi uu leeyahay maraykanku duqeeyey hotel ay deganaayeen suxufiyiin ka yimid dacalada dunida oo halkaas wararka kasoo tebinayey. Hotelkan oo lagu magcaabo Palestine hotel waxaa lagu soo waramay in uu hal qof ku dhintay.
Dhanka kale ee magaalada Baqdaad waxaa lagu soo waramay in duqayn lagu diley weriye Tareq Ayub oo AlJazeera uga soo waramayey magaalada Baqdaad. Markiiba TV-ga aljazeera waxa uu arintaas ku eedeeyey in Maraykanku uu si ula kac ah u weeraray xarunta Al-Jazeera ee Baqdaad, waxana ay ku dareenin Maraykanku ay yaqaaneen meesha aljazeera ku taal.
BAQDAAD: Dhanka kale waxaa lagu soo waramay in maanta dagaalo aad u ba'an ay ka dhaceen Baqdaad, waxaana waraku sheegeen in la duqeeyey dhisme kamida kuwa Saddam oo kuyaal magaalada dhexdeeda. Xaafada aadka maanta loo duqeeyey ee kutaal bartamaha Baqdaad waxaa loo yaqaan Monsur, waxaana la sheegay in halkas ay ku yaalaan safaarado dhawr ah. Xaafadaas waa meeshii uu Saddam booqday
DIYAARAD DHACDAY: Sida ay werisey warbaahinta Australia waxaa maanta magaalada Baqdaad kusoo dhacday diyaarad kuwa dagaalka ah oo uu lahaa Marayakanku oo ah nooca loo yaqaan A-10 'Warthog', duuliihii diyaarada wadeyna waxaa wararku sheegeen in uu ka badbaadey.
Telefishanka Maraykanka ee ABC waxa uu weriyey in ilaa bilowgii dagaalka ay Maraykanka kaga dhinteen 90, Ingiriiskana 30, laakiin aaan tirada ciidamada ciraaq lagaranayn inta ka dhimatay ama loo hayn tiro sugan.
Warar ay faafisay warbaahinta ruushku waxa uu sheegay in safiirkii Ruushka u fadhiyey uu sheegay in Maraykanku uu si bareer ah u weeraray. Sida ay shalay werisey RIA Novosti waxaa safiirku, Vladimir Titorenko, waxaa weerarkaas kusoo gaary dhaawac yar. Waxaa wararku intaas ku dareen in safaarada Ruushka ee Ciraaq oo ay ka shaqaynayeen 26 qof lagu soo koobay 12 dagaalada halkaas ka socda awgood.
Daawo shalaygalab iyo Baqdaad GUJI HALKAN....
SUURIYA: Wasiirka arimaha dibadda Suuriya, Faruq al-Shara, oo waraysi maanta oo isniin ah siiyey wargeyska talyaaniga ee loo yaqaan Corriere Della Sera ayaa sheegay in "Maraykanku uu dhibaato weyn kasoo foodsaartay Ciraaq, iyo in nidaam-darro ka dhici doonto gebi ahaanba gobolka" waxana warkaan oo ay soo xigatey IOL uu ku daray "in aan maamul militari oo maraykan ah cidna ka rabin Ciraaq" waxan auu ku daray in "aan maraykanku aqoon u lahayn bariga dhexe oo xataa aysan aqoon sida ay u shaqeeyaan ceelasha saliida ceysriin, waxay u malaynayaan ciraaq sida Texas oo kale" ayuu yiri wasiirku sida ku cad qoraalka IOL.
JOORDAN: Wasiirka arimaha dibada ee Joordan, Marwan Moasher, oo waraysi siiyey wargeyska Al Hadath ayaa sheegay in dagaalka ciraaq ka dib dawlad kasta oo ka dhalata Ciraaq ay ahaato mid metsha gebi ahaan ciraaq oo aan inaba la kala qaybin dalka, waan ain aysan dawladaasi noqon mi day soo dhiseen US iyo Briton ayuu yiri sida ay soo xigatey IOL.
Wararka Caasimada Ciraaq ee Baqdaad
Wararka Ciraaq ayaa sheegay in Maraykanku uu weeraray meelo ka mid ah gudaha magaalada Baqdaad
SAAKAY: Wararka kasoo baxaya caasimada dalka Ciraaq ayaa sheegay in waaberigii Isniinta magaalaada laga maqlayey qaraxyo. Waxaa warku sheegay in laba bomb ay kusoo dhaceen bartamaha magaalada waaberigii saakay, dhawr kalena ay ku dheceen duleedka magaalada.
Culimada Islaamka ugu saraysa ee Falastiin ayaa Muslimaanta adduunka oo dhan ugu baaqay in ay ka horyimaadaan dagaalka uu Maraykanku hogaaminayo ee Ciraaq iyo in labada hogaamiye ee reer galbeedka (Bush iyo Blair) ay ka mamnuucaan dhulka muqadaska ah, sidaas waxaa weriyey telefishanka loogu daawashada badanyahay dalka canada ee loo yaqaan CBC TV.
"Dhammaan culimada islaamka ee Falastiin waxay ku dhawaaqeen fatwa ka mamnuuceysa qofkasta oo Muslim ah in uusan kaqayb qaadan dagaalkaas hujuumka ah ama aysan gacan siin kuwa duulaanka ba'an soo qaaday" sidaas waxaa yiri isutaga culimada West Bank iyo Gaza. Waxaana warku intaas ku daray in madaxweynaha Maraykanka George W. Bush iyo ra'iisul wasaaraha Ingiriiska Tony Blair laga mamnuucay in aysan weligood u safrin dhulka muqadaska ah ee Bariga dhere sida uu sheegay madaxa fatwada oo lagu magcaabo Mufti Ikrima Sabri. [warkaan ka daawo halkan...CBC TV]
Bush iyo Blair waxay Isniinta ku kulmi doonaa Northern Ireland.
CUDURKA SARS: Qofkii 9aad oo kudhinta Canada Cudurka SARS .. DAAWO.
[Waa maxay SARS....... GUJI... ]
MAXAA SOO KORDHAY MAANTA..... IOL
XUSUUSIN: KALABEDELKA WAQTIGA..... GUJI